DHISMAYAAL SHARCI DARRO AH OO SHAKHSIYAAD MAGAC LIHI KA BINEEYEEN DAYRKA DUGSIGA M A ALI | Toggaherer's Weblog
MARKAAKIIBTA CHINA OO SI QALDAN UGU TABABAR QAATAY MARAAKIIB MARAYKAN AH BIYAHA CHINE
Posted by: toggaherer on: March 10, 2009
Hargeysa 10 Mar 2009 (THN)
Dadweynaha ku dhaqan Xaafadda Sabo-xareed ee Degmada Maxamuud Haybe ayaa Subaxnimadii hore ee Shalay ku Waaberiistay dhismayaal Cusub oo laga unkay Dacalka W/Bari ee Dayrka dugsiga Sare ee Maxamuud Axmed Cali ee
Caasimadda Hargeysa, oo aanay ogayn Marka laga reebo Dhismayaal isku mid ah oo xiga cidhifka Koonfureed oo Xukuumadda Somaliland ugu talo gashay in dhaqaalle loogu abuuro Masaajidka Weyn ee Al-Hudda oo isna ku yaalla Koonfurka dugsiga
Guryahan Cusub ee dhismahooda laga taagay Dayrka dugsigaasi oo saqdi dhexe ee Habeen hore si qarsoodi ah looga bilaabay halkaasi isla markaasina 12 saacadood gudahood lagu dhameeyay, ayaa lagu beegay wakhti ay ardayda dugsiga M.A.Ali fasax ka ahaayeen waxbarashada munasibada Mawliidka Nabiga awgeed.
Dadweynaha xaafadaasi ayaa si weyn uga dhiidhiyay Dhismayaashan dheega ku haya Dayrka Dugsigaasi, kuwaas oo caqabad ku noqonaya isu socodka Baabuurta ka timaada Madaarka iyo Dadweynaha isaga tallaabaya waddadaa iyadoo ay xaafadaasi ku yaallaan Dugsiyo kala duwan oo isugu jira kuwo Hoose/Dhexe iyo Kuwo Sare iyo weliba Madaaris kala duwan oo ay wax ka bartaan Arday tiradoodu gaadhayso 5000 Arday.
Dhismayaashan ayaa sida ilo lagu kalsoon yahay u tibaaxeen Tifaftiraha Shabakadda Sallaxleynews waxa dhismayaashan si sharci darro ah u siisay Ash-khaas Magac ku leh bulshada oo aan la magic dhabin kuwaas oo ka ag dhaw xukuumada isla markaana ah dad aad ugu heellan ollole u raadinta xisbiga UDUB ee uu Daahir Rayaalle Gadh-wadeenka ka yahay.
Waxana wararku intaa ku darayaan in Dhulkan danta guud ah uu Daahir Rayaalle abaal gud uga dhigay shakhsiyaadka u jajaban siyaasadiisa iyo sidii uu mar labaad u kasban lahaa taageerada shacbiga oo ku isku qoomamaynaya codkii ay siiyeen doorashadii uu ku soo baxay ee sanadkii 2003-da.
Xubnahan sida Booliga ah dhulka loo siiyay oo iyagu u badheedhay khatarka ka iman karta arrintan ay isla markiiba ka sii iibiyeen Ganacsato kale si ay uga dhigtaan goobo ganacsi.
Maamulaha Guud ee Dugsiga Sare ee Maxamuud Axmed Ali, Cali Axmed Balayax oo Xalay Khadka Telefoonka Gacanta ee Mobile-ka ugu waramay sallaxaleynews ayaa sharaxaad ka bixiyay cawaaqib xumada ka iman karta go’aanka lagu bineeyay dhismayaashan, kuwaas oo noqon kara khasaare naf iyo maalba leh.
Waxaana uu sheegay inaanay Maamul ahaan Arrintan waxba ka ogayn, bacdamaa hore loogu war geliyay in aanu shaqo ku lahayn go’aan ka gaadhista wixii ka baxsan gudaha Dugsiga, kuwaas oo ay masuuliyadoodu saran tahay Golaha deegaanka Caasimada Hargeysa.
Qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan Xaafadda Saboxareed ee degmadda Maxamuud Haybe oo Subaxnimadii hore ku Waabariistay gunaanadka Guryahan ayaa si adag uga soo horjeestay Binaynta Dhismayaashan lagu dhajiyay waddada Laamiga ah oo ay ku tilmaameen kuwo sharci darro ah oo khatar ku ah Amniga iyo isu socodka Baabuurta, Waxaana ay Xukuumadda ku Eedeeyeen in halkii ay bulshadda wadooyin uga samayn lahayn ay kuwii hore iibisay, isla markaana waxa ay ugu baaqeen in si degdeg arrintaa ay uga noqoto.
Masuuliyiinta dawladda Hoose ee Magaallada Hargeysa oo iyagana aanu isku daynay inaanu arrintaa wax ka weydiino ayaanay noo suurto gelin Telefoonada oo ay naga qaban waayeen darteed.
Iyadoo ay Waddadaasi waafi ka tahay dhinaca koonfureed ee Masajidka looga dhisay guryaha ayaa waxa ay cidhiidhi ka tahay dacalka waqooyi ee guryahan laga sameeyay oo qiyaas ahaan wadada iyo dayrka dugsiga ay u dhaxayso masaafo aan ka badnayn 2 Mitir.
Wadadan ayaanu Haba yaraatee Madaxweyne Rayaalle soo marin xilliyada uu ka soo dego Gegida diyaaradaha amaba uu kormeerka ku tago Madaarka, isaga oo sii socod iyo soo socodba mara haadka la maro sii socodka (IN), wadadaas oo ku taalla Galbeedka Dugsiga.
Waxana in badan oo shacbiga reer Hargeysa is weydiiyaan sababta keentay in Madaxweynuhu jebiyo Xeerka Nabadgelyada Wadooyinka,
taasoo shacbiga kale lagu ganaaxo haddiiba ay si qaldan u maraan.
Isku soo Wada duuboo Madaxweyne Rayaalle sharciga miyuu ka Awood sarreeyaa mise sharciga ayaa Madaxweynaha ka sarreeya?!!!!!!!!!!!!!!!!!.